Kuzo zonke izitshalo ezikhulayo emhlabathini, yefilakisi akusilo ize ibhekwa njengenye enamandla kakhulu. Kuye Ucwaningo kungase kutholakale ukuthi imbewu yefilakisi asiza kakhulu ukunciphisa ingozi ukuvela nokuthuthukiswa izifo imithambo yegazi kanye senhliziyo, isifo sikashukela, isifo sohlangothi kanye nomdlavuza. Izinzuzo kanye efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka imbewu yefilakisi zihlobene ngokuqondile yawo yamakhemikhali kwengoma. Ngaphezu nezinye izakhi, ziqukethe esiningi-omega-3 okunamafutha acid, amaminerali, Antioxidants namavithamini.
Flaxseed iwumkhiqizo okunama-kilojoule amaningi: Amandla ukubaluleka amagremu 100 mkhiqizo 534 kcal. Lena cishe 25-30% of the edingekayo amaleveli. Futhi uma ucabangela iqiniso lokuthi iqukethe izinto eziningi ezibalulekile emzimbeni kanye izakhi, yefilakisi imbewu ngokushesha okukhulu wathandwa izinhliziyo abalandeli yokudla ukudla okunempilo emhlabeni wonke.
Ukwakheka imbewu yefilakisi kukhona linolenic samanje, alpha-linolenic futhi arachidonic acid. Nge njalo ukuzisebenzisa eziningi ezincane emzimbeni kunciphisa inani cholesterol elimazayo. A bazogcwalisa umzimba wakho ne fibre, i-omega-3 okunamafutha acid kanye monounsaturated amafutha, kungavimbela ukuthuthukiswa isifo senhliziyo, izikhathi eziningana ukuze kuncishiswe ingozi yesifo senhliziyo.
Izinzuzo kanye efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka imbewu yefilakisi - ngesihloko lapho singakhuluma isikhathi eside. Ngaphezu kwakho konke lokhu okungenhla, kuyafaneleka ukuthi uwoyela kuzo kwenza kube nokwenzeka ukuba balahle usongo amahlule, isetshenziselwa nokuvimbela umdlavuza, kujwayeleke izinqubo umzimba wonke izicubu kanye izitho. Ikakhulukazi ngempumelelo kwenza ukuthuthukiswa umdlavuza webele, ngoba lignin eziqukethwe uwoyela kunciphisa inani estrogen emzimbeni.
A ehlukile indaba ephathwayo - izinzuzo futhi efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka imbewu yefilakisi kubantu abanesifo sikashukela. Kukholakala ukuthi engayitholi njalo wezokudla ivumela ngcono umzimba sisonke inciphise ushukela egazini.
I izakhiwo esiyingqayizivele yefilakisi imbewu ithuba elikhulu elisetshenziswa izimonyo. buso abahlukahlukene izinwele kanye isikhumba, kanye lotions, phakathi lapho kukhona flaxseed izingxenye kukhona ithemba akhethekile ephumelela kakhulu. Ngisho nangemva kokuba ukusetshenziswa imbewu ukudla, ungabona ngcono isikhumba, izinwele nezinzipho.
Amafutha kusukela imbewu yefilakisi kuthathwa njengesibikezelo esiyiso wezokudla futhi avame ukusetshenziswa ukupheka. Lifanele kunoma ubani ofuna ukuba balahle Kilos esengeziwe noma silondoloze ukuma endaweni esimweni esejwayelekile. Engeza i uwoyela enjalo kungaba yisiphi iphalishi ukudla, isitshulu, salads, izifundo zokuqala, njll ...
Thenga imbewu yefilakisi kungaba esitolo. Ochwepheshe batusa ukuthenga imbewu wonke luhlaza ophuzi okusagolide, njengoba bangalahlekelwa yabo izakhiwo ezuzisayo futhi singasetshenziswa ligcinwe isikhathi eside. Umsoco kanye nokusungulwa imbewu ensundu segolide cishe ngesinye isikhathi. Kodwa kungakhathaliseki ukuthi basekela isigaba, kufanele shiny, iyunifomu ngosayizi. imbewu lonke ingagcinwa endaweni epholile eyomile izinyanga eziningana, kodwa hhayi ukuba imbewu ochotshoziwe Rancid, kungcono uwagcine i isitsha moya esiqandisini.
Abantu abaningi laliyoba ukujabulele ukufunda ngenkundla Izimo yefilakisi imbewu. Eqinisweni, njengoba nje kungekho noyedwa ka Izimo (sicabangela izindlela ngokulinganisela ukusetshenziswa). Nokho, kuwufanele ukukhumbula ukuthi Ifilakisi imbewu aqukethe eningi fibre. Lokhu kusho ukuthi inani elikhulu imbewu kungabangela ubuhlungu esiswini, uhudo, ukuvuvukala. Okumele kuqashelwe kufanele bawasebenzisele ngesikhathi sokukhulelwa ngenxa ingozi luyasiza ekuzimeleleni hormone.
Kuze kube manje, izinzuzo kanye efanele ibe kuhlu lokuhlukumezeka imbewu yefilakisi uqhubeke ukuba zihlolwe, futhi kungenzeka ukuthi esikhathini esizayo esiseduze, sizofunda mayelana nezici ezintsha futhi eyingqayizivele kwalo mkhiqizo.
Indlela ukugqoka ngendlela evumelana nesimo kwamaGreki asendulo kwezempi. Nezingubo ngokunqoba kwamaGreki asendulo